SHIRANIAN IMBWA INOBEREKA RUZIVO NEMIFANANIDZO - IMBWA
Shiranian Imbwa Inobereka Ruzivo neMifananidzo
Pomeranian / Shih Tzu Mhando Dzakasanganiswa Dzembwa
Shiranians Emma pamwedzi mitatu (pasi) aine hanzvadzi yake 'hombe' Sophia (kumusoro) pazera remwedzi minomwe-- 'Sophia anogona kuonekwa achitamba netennis yake bhora, pamusoro. Ndiye imbwa inoshamisa takasarudza kuwedzera kumhuri yedu nemumwe Shiranian, Emma. Hunhu hwavo hunoshamisa uye hwakasiyana zvakasiyana. Iwe unogona kuona kuti kutaridzika kwaSophia kwakanyanya kutarisana nePom uye kwaEmma kune mamwe maShih-Tzu. Kunyangwe hazvo Sophia ari mukuru wevaviri, Emma akamupfuudza nehukuru (Sophia akabuda akatenderera makiromita mana nehafu mapaundi Emma angangoita matanhatu uye anofungidzirwa kuti ave pamusoro pa9). Tinogona kudzima cable TV yedu vaviri ava imhirizhonga yekuona. '
Shiranian haisi imbwa chaiyo. Muchinjikwa pakati pe Pomeranian uye iyo Shih Tzu . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
American Canine Mbeu dzakauchikwa Club = Shiranian
Mugadziri Wekubereka Rejista = Shiranian
Dhizaini Imbwa Kennel Kirabhu = Shiranian
International Dhizaini Canine Registry®= Shiranian
Gizmo weShangiranian (Pom / Shih Tzu musanganiswa) ane makore 1 ekuberekwa
Gizmo iyo Shiranian (Pom / Shih Tzu musanganiswa rudzi) imbwa pamasvondo gumi nemaviri
Izzy weShih Tzu / Pomeranian musanganiswa wembwa imbwa (Shiranian) pazera remwedzi minomwe-- 'Izzy aive wevazukuru vangu kana baba vakati' mbwanana inofanira kuenda 'saka ndati ndichavatora. Ndiye imbwa diki yakanakisa yandati ndambove nayo. Akangwara kwazvo uye aive nyore kudzidzisa. Haadudzi asi bvudzi rinobuda kana ndichimukwesha. Imbwa yakanaka yekutarisa. Anoda kutamba nekitsi yangu yekuRussia yekuSiberia iyo iri 1 mwedzi mukuru pane Izzy uye katsi inorema ingangoita 2 mapaundi zvimwe. Ivo ndivo shamwari dzakanakisisa uye vanoita kuti ndiseke. Kana vasiri kurara, ivo vari kutamba. Ivo chete akacheka pamwe chete. Wese mumhuri anoda Izzy. Iye mudiki ane yakawanda simba uye ane rudo kwazvo. Anopa kutsvoda nguva dzese. Ini ndinoda iyo nyaya yekuti ini handifanire kumuendesa kunogadzira mwedzi wega. Zvese zvaanoda ibhati yemaminetsi gumi nemashanu uye kuomesa uye Izzy yaitwa. Ndiye imbwa yakanakisa yandati ndambove nayo. '
Vausch iyo Pomeranian / Shih Tzu musanganiswa wemhando (Shiranian) mbwanana
Rudy the Shiranian (Pom / Shih Tzu musanganiswa imbwa yemhando) paanenge mwedzi mitanhatu ekuberekwa
chinese shar pei lab musanganiswa
Rudy the Shiranian (Pom / Shih Tzu musanganiswa imbwa imbwa) mbwanana angangoita mwedzi mitatu yekuzvarwa
Shiranian puppy (Pomeranian / Shih Tzu musanganiswa imbwa yemhando), mufananidzo neruremekedzo rwaFaded Rose Kennel
Shiranian puppy (Pomeranian / Shih Tzu musanganiswa wekubereka), mufananidzo neruremekedzo rwaFaded Rose Kennel
Lucy, Shiranian puppy pamasvondo mapfumbamwe ekuberekwa
Maximus weSiraniani (Pom / Shih Tzu musanganiswa) ane mwedzi mitanhatu uye angangoita mapaundi mana- 'Ane hunhu hwekufira, uye mukomana akazvimiririra anofarira kudiwa. Ini ndaizotenga imwe Shiranian puppy mune nanosecond dai ndaive ndakatarisa. Anoda munhu wese - vacheche, vana, varume, vakadzi, katsi, dzimwe imbwa huru nediki. Akango zara nazvo uye akangwara zvakanyanya! Kupaza dzimba kwave kuri mhepo! Kunyangwe hazvo ari mudiki uye anoda kuzvirovera pamusoro paanosimudza gumbo, anofarira kuenda kunze kwemvura kana kupenya. Sezvo tiri muWisconsin, vatongi vachiri kubuda kuti sinou ichabvisa kufambira mberi kwake mukuparadza imba here. '
Ona mimwe mienzaniso yeiyo Shiranian
Shiranian Mifananidzo 1
Chinyorwa chePomeranian Sanganisa Inobereka Imbwa
yebhuruu mhino brindle pitbull imbwa
labrador uye chihuahua sanganisa vana
german mufudzi hound sanganisa hunhu
ndiratidze mifananidzo yemamerica bulldogs
sei imbwa dziine mhino dzepingi
mombe yekuAustralia imbwa imbwa yekusanganisa